Sababahii ka danbeyay Jabka Maxkamadaha
Prof Mohamud Uppsala.
Dhamaan ummada Somaliyeed meel kasta oo ay joogaan wey salaaman yahiin, salaan ka dib waxaan rabay wax yaalo badan oo sababay jabkii ku dhacay Maxkamadihii islaamka ee ka talinayay inta badan dalkeena. Ka hor inta aanan ka waramin sababaha aan wax yar ka iraahdo waxey qabteen, wanla wada soconaa maxkamaduhu in ay qabteen howl aad u wanaagsan xagga abniga haba ugu weynaadee runtii waxey la soo baxeen siyaasad furfuran oo soo jiidaneysa qof kastoo Somali ah gaar ahan reer muqdisho oo runtii la dhahi karo waxey ku hoos jiren gumeysi.
aan u so noqdo mowduuceyga aana ku bilaabo
1. doorashadii la doortay gudomiyaha golaha shuurada Sh. Xassan Dahir Aweys waxey aheyd nabarkii ugu horeyay ee gaara maxkamadaha Islaamka waayo waxaan la wada soconaa in maanta aduunka uusan xor aheyn una duleysan tahay dawlada mareykanka oo qofkeysan rabin uu yahay qof argagaxiso ah, sidaas darteedna uu mareykanka iyo inta ku fikirka aheydba ay candhuuftooda dib u laqeen waayo waxey u arkeen sheekha nin mayal adag oo ka hor imaan doona waxa alla iyo waxey la yimadaan.
2.Tan labaad waxey aheyd Maxkamadahii markey dhabarka u jeediyeen ururadii bulshada,oday dhaqameedyadii,haweenkii, dhalinyaradii iyo waliba maamulkii wagaa jiray ee Cadde gaaboow oo la dhahi karo wey ka qeyb qaateen halgankii lagu karbashayay mooryaantii iyo madaxdoodii ee ka talinyay waagaas muqdisho.
3.tan sadexaad waxey tahay dariiqadii ehlu sunna wal jameeca ( al suufiyah) oo ay maxkamaduhu aysan waxba kasoo qaadin oo aysan xukunka ka qeyb galin waayo waxey u arkayeen cadaow lid ku ah siyasadaha Maxkamada iyagoon ka fakarin ineey jiraan dad badan oo raacsan sufiyada una baahan in laso jiito taas oo maxkamadaha garan waayeen.
4. Tan afaraad waxey tahay sida ay ku wajaheen maamulkii ka jiray Kismayo oo runtii la dhahi karo guuldaradii labaad ee ugu xumeyd ee soo gaarta , sidaan la soconay maamulka dooxada jubba isagooo awalba xaaraan iska ahaa ayuu ka koobnaa maamulkiisa sadex nin,Serar Goobaale iyo Barre.
Maxkamaduhu waxey kala saareen ama kala doorteen sadexdii nin ee markii horeba xooga ku heystay magaalada Kismayo, Barre hiiraale oo wiigag ka hor loo doortay wasiirka gashaan dhiga ee dowlada faderaalka ah iyadoo markaas dowlada ay waday olalaha lagu soo galinayo dowlada itoobiya ayaa waxuu gaashaanka ku dhuftay Barre hiiraale hadafkii dowlada war cadna ku yiri wax ajnabi ah ma soo gali karo iyadoo dadkii oo dhan ay u fahmeen in Barre hiiraale uu arintan uu ku dhawaaqay isagoo ah wasiirka gashaan dhiga ay dhabar jab weyn ku tahay dowlada isla markaana ay si aad ah isugu soo dhawaanayan Maxkamadaha islaamiga ah lakin ma,aysan dhacin taas markaliya ayaa wax is badaleen, dadkii waxey ka war helleen Bare oo kismaayo maxkamadaha ay ka ceyrsadeen halka ay Goobaale iyo seraar ay dhabarka gashteen,halkaas maxkamadaha waxey ku abuuratay cadow cusub oo ay kasban kartay lakin ay ku fududadeen sideey ula dhaqmeen.
5. mida shanaad oo ah mida ugu qatarsan eeba soo dadajisay burburka Maxkamadaha wana hadalo aan lo baahneen uu meel fagaaro ah ka yiri Yusuf Indho Cadde isagoon wax caqli ah ama dubulamaasiyad ah anu isticmaleyn,Yusuf indho cade oo ahaan jiray nin dagaal ooge ahaa lakin magaca sheekh nimada uu wato iyo caawinadii uu siiyay maxkamada xiligii qabqablayaasha lala dagalayay uu ku qalday madaxii maxkamaha ka dibna ay u doorteen gudoomiyaha nabadgalyada oo u dhiganta wasiirka gaashaan dhiga ayaa meel fagaaro oo ay wada joogaan war fidiyeeno caalami ah ayuu ku yiri waxaan ku casunay dalkeena dagaalyahanada Muslimiinta ah ee aduunka ka dagaalanto oo uu aduunka reer galbeedka ah iyo inta kabaha u qaadaba ay u yaqaanan (argagaxiso) hadalkaas oo aahaa mid aan laga fiirsan kana soo baxin caqli saliim ah ayaa mar kaliya aduunku si feejignaan ah u fiiriyay somalia. Jaale yusuf intaas kuma uusan ekaninee waxuu markale balansaday shacab u sacbiya iyo war fidiyeeno waxuuna ku hanjabay inuu qabsan doono magaalada Adis ababa,hadalkaas oo dowlada itoobiya ay aheyd mid ay dooneysay iney ka hesho hogaanka maxkamadaha ayaa waxuu ku dhaqaaqay Meles sanawi inuu baarlamaankiisa horgeeyo hadalkii yusuf indho cade kana ansixiyo dagaal in ay ku qaadaan Somalia.
Mr Yuusuf wali ma aamusine waxaa afkiisa ka soo yeeray 7 cisho, todobadaas cisho yusuf waxuu ku shegay iney wadanka uga baxaan cidamada itoobiya hadeysan ka baxina uu dagaal ku qaadayo, aduunkii ayaa ka qeyliyay 7badas cisho kuna tilmamay hadal aan wanaagsaneen caqlina loo adeegsan gardarana ah ay wadaan Maxaakimta.
Dowlada ku meel gaarka ah iyo tan itoobiya waxey halkaas ka heleen janiskii ugu wanaagsanaa noloshooda waxaana taas ka caawiyay dowlada aduunka gumeysata ee mareykan iyadoo xayiradii hubka ka qaday Somaliya. Hadaba aqristoow todobadii cisho markey dhamaatay maxaa dhacay,dowlada itoobiya oo addunka amar ka heysata iyo dowlada ku meel gaarka ah waxey weerar ku soo qadeen ciidamada ku meel gaarka ah iyadoo aduunkuna uu u fahmay in dagaalka ay bilaabeen Maxkamadaha waayo hadalkii Yusuf indho cade�ayaa horyaal markasta.
Iskusoo wada duuboo shantaas qodob ayaa ugu weynaa waxyaabaha jabiyay hogaankii maxkamadaha taaasoo ay ugu weynaa hadalkii Yusuf indho cade ka soo yeeray, marka waxaa la dhahi karaa Yusuf indho cade waxuu la mid yahay Saddam xussein oo waxuu jabiyay quwad muslin ah.
waxaa kaloo jira waxyaale kale o yaryar maxkamaha taageerayaashooda ay ku yaradeen sida joojinta filimada,jaadka iyo fanaaniinta dadkaas ayaa hadda waxey u sacab tumayaan ciidamada dowlada iyagoo ciyaalkii kubada ay ku jeesjesayaan maxkamahii una adeegsanaya hadalada kubada cagta sida ��Maxkamadaha waxaa labada dhinac kaga guuray Ronaldinho iyo Figo�� halka ay muqayiliinta oranayaa ��Gaari jaad wale ah ayaa maxakiimta ku kor kufay�`halka fananiinta oranayaan ��xaliimo qaliif ayaa kadaba heestay maxkamadaha�� intaaas oo cadownimo ah maxkamaduhu wey baabi,in kareen. arimahas ayay aheyd waxii burburiyay Maxmadahii shacabka diirsanayeen,hadda wadanka waxaa heeysta dowlada federalka waanu arki doonaa waxey shacabka ula yimadaan lakin waxaa nasiib wanaag ah in maanta wadanka labo guruub oo is qilaafsan uusan jirin haddusan hadda Maxamed dheere howshiisa bilaabin.